Meghee = Uto | Martech Zone
Na mbido afọ a, mụ na ndị otu NFL NFL gbakọrọ ọnụ iji nyochaa nchekwa data ha na ngwa ahịa email. Ọ bụ nyocha zuru ezu nke ọtụtụ ngwaọrụ dị na ha. Akụkụ ndị m lekwasịrị anya bụ:
Ike ijikọta azịza ndị dị na mpụga
Ike iji rụọ ọrụ usoro
Nzaghachi nke ụlọ ọrụ site na njikwa na nkwado akaụntụ
Abụọ ndị mbụ n’ime ha bara uru n’ọdịnihu. Achọrọ m ijide n'aka na nzukọ ahụ na-arụ ọrụ yana azịza nke jikọtara njikọta na akpaaka, n'agbanyeghị na atụmatụ ha ugbu a nwere ike ọ gaghị abụ ruo asọmpi ahụ. Ọ bụ esemokwu siri ike iji mee ka ndị mmadụ ghọta, mana ụlọ ọrụ nwere isi nghọta. Mgbe ha malitere ịrụ ọrụ na mpụga isi ikike ahụ iji mepụta ego ọzọ, ha na-amalite imebi isi ngwaahịa ha ma nwee ike ịnwe nhọrọ nke ngwaahịa ndị bara ọgaranya, mana dara ogbenye na nhazi, nkwado, na ihe ọhụrụ.
Ọnọdụ teknụzụ nke oge a na-agbanwe. Ọ ga-akara m mma ịkọwa ụlọ ọrụ iji mepee teknụzụ nke nwere ike akpaghị aka ma jikọta ya nke ọma, karịa ngwaahịa bara ọgaranya.
N’ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ nabatara ndụmọdụ m. Kama ịrụ ọrụ n'otu ụzọ, ha amalitela ịrụ ọrụ na ụzọ atọ dị iche iche, ọzọkwa nke na-adịghị adị ugbu a, dị n'akụkụ nkuku. A na-eme tiketi ha na usoro tiketi ha, Njikwa Mmekọrịta Ndị Ahịa ha na-eme na sistemụ CRM ha (Salesforce), a na-eme Ngwọta Azụmaahịa Email ha na Ngwọta Azụmaahịa Email ha (Exacttarget). Ngwọta nke anọ bụ azịza ụlọ ịntanetị, ihe anyị ahụbeghị ruo taa.
N'ime otu izu nke mbụ mwekota, anyị nwere email si n'ọnụ ụzọ ka mma nkwukọrịta na ha Season Tiketi ejiri. Ugbu a, anyị na-arụ ọrụ na ijikọ ọdụ data tiketi ha na CRM ha… ihe ịma aka bụ na sistemu tiketi anaghị abanye na ndị enyi. Nke ahụ dị nwute ma na-ahụ ya dị ka ihe mgbochi iji gaa n'ihu na usoro a.
Companylọ ọrụ ndị na-azụ tiketi nwere ike ịchọ ichegharị atụmatụ ha ma jigidesie ike ha ike, ma ọ bụghị ya, onye ọzọ ga-abịa na ngwọta nke ga-egwu nke ọma ma dochie ha.
Tags: APIntinye ntinye ihe omumeibuagwakọtara sọftụwiamwekotaemeghe software